Iinzuzo Dog nokuzilungisa Tables - China Ningbo Haoshu Yinjiang Jintangli
Itheyibhile ubeka ngokuzenzekelayo inja yakho nomphakamo elula ukuba nokuzilungisa. Akuyomfuneko ukuba ufunde ngaphezulu okanye uzame iqeqesha anobunzima inja yakho ngoxa yena okanye yena esifubeni sakho. Endaweni yoko, netafile nokuzilungisa ibeka nenja ephakamileyo ephelele nokuzilungisa.
Phantse zonke iitafile inja ukuzilungisa kuza nabanye wohlobo non-slip umphezulu - musa ukuthenga elinye ngaphandle kokuba kukho padding exabe okanye ezinye uhlobo kwesigubungelo lula ukuba inja yakho okumbophelela. Inja yakho iya kuba zimanzi kwaye lokutyibilika kwaye rhutyu ukuba kumphezulu ayikho ekhuselekileyo. Ukongezelela, iitheyibhile ezininzi ukuzilungisa kuza nangengalo zentsimbi kunye irhintyela ezinokusetyenziswa ukuze ugcine inja yakho ukholosile ndawo ngexesha nokuzilungisa.
Inyathelo phambili, step kude
Xa inja ukuzilungisa iitafile nokuba ngesanti kubunzulu baphantsi okanye yombane, unganciphisa itafile phantse yonke indlela eya phantsi. Lo ngumsebenzi omkhulu kuba inja leyo kakhulu okanye kancinane uziva kuphakuzela okanye ndixinezelekile. Endaweni yokusebenzisa amandla ithwalwe inja kwindawo nokuzilungisa, usebenzisa nje ngomnxeba ukuhamba inja phezu kwetafile. Xa nokuzilungisa liphelile, ukuthoba itafile kwaye inja ahambe off.
ixesha Post: Aug-09-2018